'စီနီယာတွေရဲ့ ရုပ်ရှင် မရိုက်ခင်မှာ ဘာတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်တယ်၊ ဘယ်လိုတွေ ကြိုးစားတယ်ဆိုတာကိ?? - Yangon Media Group
မကြာခင်ရုံတင်ပြသတော့မည့် ‘စရိုက်’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနှင့်ပတ်သက် ပြီး ယင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် ကျော်ထက်အောင်နှင့်တွေ့ဆုံကာ ယခုလိုပဲ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး-‘စရိုက်’ဇာတ်ကားကြီးရုံတင်တော့မှာတော့ အဲဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး တော့ ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ-ဟုတ် ရင်ခုန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က Family Show တော့ ကြည့်ပြီးပြီ။’စရိုက်’ဇာတ်ကားကအရင်တုန်းကလည်း အန်တီဝါနဲ့ ဦးထွန်းထွန်းနိုင်တို့ ရိုက်ခဲ့ ဖူးတယ်။ ‘ဒေါင်ဒေါင်မြည်တဲ့အသည်း’ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရိုက်ခဲ့ဖူးတာပါ။ အခု ကျွန်တော်တို့က ပြန်ရိုက်တာပေါ့နော်။ အခု’စရိုက်’ဇာတ်ကားမှာတော့ ကျွန်တော် က ဦးထွန်းထွန်းနိုင်နေရာကနေပြီးတော့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။ Family Show ကြည့်တော့ အန်တီဝါနဲ့အတူတူကြည့်ဖြစ်ကြတယ်။ အန်တီဝါ ကိုလည်း ကျွန်တော်မေးပါတယ်။ ကာရိုက်တာဝင်ရဲ့လားလို့။ အန်တီဝါက ကာရိုက်တာဝင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဖြေ-ဒီဇာတ်ကားက အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာတွေကို ရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းဆိုတာကလည်း အပြင်လောကမှာ တကယ်ဖြစ်နေတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဇာတ်လမ်းဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါ။
ဖြေ-ဒီဇာတ်ကားလေးက ရိုက်ထားတာတော့ နှစ်နှစ်ကြာသွားပြီ။ ၂ဝ၁၇ သင်္ကြန်ပြီးလောက်ကတည်းက ရိုက်ထားတာ။ ”ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်’ဇာတ် ကားမတိုင်ခင်ကတည်းက ရိုက်ထားတာပါ။
မေး-‘စရိုက်”ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားမှာ ဘယ် လိုကာရိုက်တာနဲ့ မြင်တွေ့ရမလဲ။
ဖြေ-ဒီကားရဲ့ Trailer တက်တော့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ အရမ်းပေါက်သွား တယ်။ အခုတော့ ကြာသွားတဲ့အတွက် ပရိသတ်ကို ပြန်နှိုးရ တော့မှာပေါ့။ ကာ ရိုက်တာတော့ အရမ်း ဆိုးတယ်။ ဘယ်သူ့ ကိုမှလည်း အလေး အနက် မထားဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း အလေးအနက်မထား တတ်တဲ့ ကာရိုက် တာပါ။ စပယ်ယာ လုပ်တယ်။ ကြုံရာ ကျပန်းလုပ်တယ်ရရ စားစားပေါ့။ မိန်းမ ကိုလည်း ဂရုမစိုက် ဘူး။ သောက်သောက်စားစားနေတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကာရိုက်တာပါ။
မေး-အဲဒီဇာတ်ကားရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ပညာနဲ့ အခုသရုပ်ဆောင်ပညာ ဘယ်လောက်ထိ တိုးတက်လာပြီလို့ထင်လဲ။
ဖြေ-အကောင်းဘက်ကနေ သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အခုအချိန်မှာ သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်။ အနည်းနဲ့ အများသိသင့် သိထိုက်တာလေးတွေသိလာတယ်။ အဲဒီအပိုင်းလေးတွေတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မြင်မိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သုံးသပ်ရတာတော့ခက်ပါတယ်။ အများရဲ့ ချစ်ခင်မှုတွေက တဖြည်းဖြည်းပိုရလာပါတယ်။ စီနီယာတွေရဲ့ ရုပ်ရှင်မရိုက်ခင်မှာ ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်တယ်။ ဘယ်လိုတွေကြိုးစားတယ်ဆိုတာကို လေ့လာ တာက ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ပညာရပါတယ်။
ချစ်သူသက်တမ်း နှစ်နှစ်အကြာမှာ လမ်းခွဲခဲ့တဲ့ Bora နဲ့ Feeldog
ဒေသတွင်း ပြဿနာစရှာ၊ သေနတ်စဖောက်တဲ့အဖွဲ့က ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ မဖြစ်စေရဘူးဟု UWSA ပြောခွင့်ရဆိ??
အိန္ဒိယသို့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ခရီးစဉ် ယာဉ်တန်းများဖြင့် ၁ဝ ရက်ကြာ လည်ပတ်မည်
မြောင်းမြတံတားဖွင့်ပွဲကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တက်ရောက်မည် ၊ ဧရာဝတီတိုင်း ခြေ??